Wararka Maanta: Talaado, Feb 26, 2013-Xoogag Taabacsan Al-shabaab oo dilay Guddoomiyihii Deegaanka Buusaar ee Gobolka Gedo iyo ku Xigeenkiisii
“Kooxo hubeysan oo Al-shabaab ka tirsan ayaa xalay u dhacay guryihii ay deegaanka ka deggenaayeen guddoomiyihii iyo ku xigeenkiisii deegaanka Buusaar kaddibna way toogteen,” ayay yiraahdeen dadka deegaanka oo la hadlay saxaafadda.
Deegaanka Buusaar ayaa ka tirsan degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo, wuxuuna dhinaca bari kaga beegan yahay 40-km, iyadoo aysan jirin wax jawaab ah oo ay ciidamada dowladda ka bixiyeen falka ay Al-shabaab ku dishay labadan mas’uul.
Saraakiil ka tirsan maamulka degmada Gedo ayaa saxaafadda u xaqiijiyay falkan, iyadoo xaaladda deegaanku ay saakay tahay mid deggen, waxaana lagu wadaa in maydadka labadan mas’uul lagu aaso deegaankaas isla maanta.
Al-shabaab ayaa horay uga talin jirtay deegaankan, inkastoo ay dagaal uga baxeen bartamihii sannadkii hore, waxaana tan iyo xilligaas ay Al-shabaab ku sugnay duleedyada deegaankaa, iyagoo dhowr jeer werarro ku qaaday.
Gobolka Gedo ayaa wuxuu ka mid yahay gobollada ay dagaallada xooggan ku dhexmarene xoogagga Al-shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Itoobiya iyo kuwa Kenya ee qaybta ka ah AMISOM.